XABASHI/IMBEGHATI TAGTAYE: Maxaa xiga ? | Wargeyska Xog-Ogaal
XABASHI/IMBEGHATI TAGTAYE: Maxaa xiga ?
Labadii bilood ee u dambeeyay sanadkan, gumeysiga Xabashida iyo Daba-dhlifkooda/kooxda Imbeghati waxaa ku dhacey jab iyo jahwareer dhinac kasta ah, Siyaasad iyo ciidamba. Midda siyaasada oo aheyd bilowgii jahwareerka soo gaarey, kadib markii ay qaar ka mid ah Dowladaha Reer-galbeedka ee dhaqaalaha siiya kooxdan Imbeghati ay tallo u soo jeediyeen Nuur Cadde ‘Masuulka labaad ee kooxdan’ imbeghaati, taladaa oo aheyd in uu ka nadiifiyo Maamulkiisa dagaal-oogayaasha kuwa aadka loo necebyahay waxaa oo ay ka mid yihiin: Maxamed Dheere, Cabdi Qaybdiid iyo Darwiish. Maxaa dhacey ? Ra’iisal wasaare ku sheeg Nuur Cadde ayaa xilkii ka qaadey dagaal-ooge Maxamed Dheere oo ahaa Duqa Magaalada Muqdisho.
Dagaal-oogayaashii waxay arkeen in la soo galey, waxayna sameysteen gaashaan-buur uu horboode u yahay sida caadiga ah Odey/Dagaal-ooge C/laahi Yusuf, markiiba Madaxwayne ku sheeg ama dagaal-ooge Odey C/laahi ayaa markiiba ku gacan sayrey, is-jiijiid iyo Anaa kan ah iyo Adigaa kan ah waxay talo ku goosteen inay Aabahood dhiig-yacab Melez-Zinawi u garsoor tagaan. Muddo asbuuc ah oo qal-qaalo iyo sasabo ka dib Zinaawi wuxuu ka dhameeyay inay heshiiyaan.
Heshiiskan wuxuu ahaa mid aan daacadnimo (danta Dalka) iyo dadnimodooda ay u gaareen ee wuxuu ahaa mid Iska-gad iyo haku caasiyin (Cadowga Soomaaliyeed) Aabahood Zinaawi dartiis loo galay, mana dhici karto in Kooxdani si madax banaan iskood u heshiiyaan micnuhu waa Qabbaano. Dagaal-ooge kii u dambeeyay waa Odey C/laahi isaguna sida la isla dhex marayo waxaa la sheegayaa in la cayrin doono.
Ciidanka gumeysiga sidoo kale waxaa iyagana soo fara saarey iska-caabin xowli leh, waxaana soo gaarey dhibaatooyin aaney hore u arag Askar badan ayaa ku nafwaayey, qalab-ciidan oo fara badan ayaa uga burburay waxaana u sabab ah Ciidanka Isdifaaca Dadka Soomaaliyeed oo helay Tabobaro iyo qidado cusub, waxaa kaloo jira inay barteen hab-dhaqanka Jabhada/Ciidanka waxashta ah ee Dalka ku soo duulay.
Xabashuhu markii uu ogaadey in ay dabin ku dhaceen oo ay cadaatey in Ummadda Soomaaliyeed aaney gumeysi/quursi qaadaneyn, sida cad waxaa qasab ku noqotey inay dib-gurasho sameeyaan oo Su’aashu maanta ma aha xabashi ma baxeysaa ee waxay tahay, goorma ? ma bari mise baridambe ? Haddii ay Xabashi baxdo waaba jabtayee ama baxeysaaye maxaa u yaala Kooxdan dambiilayaasha ah ee Imbeghati, Jawaabtu waa iska waadix waana in ay Addis-Abbaba ama Nairobi guryihii looga dhisay aadaan.
Maxaa Xiga ?.
Ururo diimeedka kala aragti duwan, Maaxaakiimta, Al-shabaab, JABISO iyo kuwo kale.
Qaar ka soo harey kooxda Imbeghati oo lagu xoojiyay Ururka Dibu-xoreynta garabka Jabuuti.
Soomaalidu/Ururadani ma ku heshiin doonaan Siyaasad hal jiho leh. oo marka dambe horseedi doonta Jamhuuriyad Islaami ah ama mid kaleba oo shaqeynaysa si Il-baxnimo iyo xirfad Dowladnimo leh.
SAADAAL: Haddii ay buburto Kooxda Imbeghati oo sida cad burburi doona markay Xabashi Dalka ka baxdo, waxaa muuqata in uu dhici karo Dagaal sokeeye oo dhex mari doona Qabiilo isku ciil qaba ama Jabhadahan Islaamiga ah ee hadda dagaalka kaga soo horjeeda Cadowga Xabashida. Waxaa kaloo dhici karta in dagaalkani noqon doono mid markiiba iska dhamaada. taasoo loogu maleynayo kooxahan dagaal yahanka ee maanta jira waxaa ugu xoog badan Ururka Al-shabaab, Markaa laga yaabo inuu inta kale qasab uga dhigo ama inay iyaga ku biiraan ama ay hawada ka baxaan, kadibna ay ku dhawaaqaan Jamhuuriyad Islaami ah.
Arinta ugu qatar wayn ayaa ah dagaal dhex mara kooxo Diimeedka waayo Kooxkastaa waxay aaminsan tahay in Xaqqa iyagu ku taagan yihiin, haddii uu ku dhintana Jannada orod ku galaayo. sida la wada ogyahay maalmahaan ka dib markii ay guushu soo dhawaatey waxaa soo if-baxay qilaaf xoog leh oo ka dhexeeya Ururo Diineedka oo waxoogaa ku kala duwan Geedi-Socodka Siyaasadeed (Political-process). laakiin dhab ahaan qilaafka u dhexeeya Ururadaan ma aha mid Diineed ee waa mid siyaasadeed oo koox waliba si gooni ah siyaasada u taqaano.
Dagaal-ooge waqtigiisii waa dhamaadey hadda waxay joogtaa Wadaado Siyaasadeedka, Waxay dad badani rumeysan yihiin in Wadaadadu Siyaasada aqoon u leeyihiin laakiin mar marka qaar waxaa muuqaneysa in ay afka ka tahay Siyaasinimada lagu sheego !. Sida la sheego arimaha ay aadka ugu liitaan waxaa ka mid ah Xiriirka Bulshada, bulshada oo nooc walba leh sida Calmaaniyiin (Maadiyiinta), Suufiyo, Qabiilo, Odoyaasha, Dhalinyarada(caadiga ah ee aan wadaado aheyn) iyo Ciyaartoyda ama Fanaaniinta. Bulsho kastaa waxay ka kooban tahay kooxo kala duwan mana dhici karto in dadkoo dhan sidii Malaa’ik jid qudha la wada marsiiyo, taas awoodeeda waxaa leh Allaah (SWT).
Midda labaad waa qodob/hadaf Siyaasadeed oo Caalami ah yacnii Dunida Muslimka, Ma xuma Muslimiinta oo dhan waa Walaalo waana isku dan, Laakiin marka hore waxaa muhiim ah inaad shacabku kugu qanco Nidaamkaaga, maskaana uu kalsooni buuxda ku siiyo, Marka hore waajibkaagu ha ahaado Gurigaaga iyo qoyskaaga hadana deriskaaga, sidoo haku socoto. Inta badan waxaa dhacda markii siyaasad hagaagsan la waayo in dadka hanjabaad/dil iyo dacaayad loo adeegsado taasoo ah waxaan habooneyn.
Ugu dambeyn Illaahay waxaan ka baryeynaa inuu Ciiddan ciiddeeda kale Dalkeenii oo xor ah, nabad ah, farxadi taallo na tuso ”AAMIIN” Wixii soo socda/qayb ah Ilaahay ayaa u caalim ah, Bal aan dhowrno siday wax noqdaan.
← AFARTA MEEL: ee laga haysto Mujtamaca Soomaaliyeed. BURCAD BADEEDKA: Soomaalida Daawo Warbixintii u dambeysay! →
One thought on “XABASHI/IMBEGHATI TAGTAYE: Maxaa xiga ?”
Preston Catan 04/14/2011 1:55 b